Miaraka amin'ny Trigger Trader dia azonao ny fampiasa rehetra an'ny Standard Trader fa miaraka amina sosona fanampiny izay rafitra semi-automated (indray mandeha ihany). Ny hatsaran'ny Trigger Trader dia azonao ampiasaina amin'ny fotoana mitovy amin'ny Standard Trader.
Amin'ity rafitra ity dia azo atao ny mampiasa singa avy amin'ny tondro samihafa mba hamoronana fanamboarana izay mandrehitra indray mandeha fotsiny amin'ny fe-potoana voafidinao. Raha vantany vao mikatona ny varotrao dia azonao atao ny misafidy ny hanokatra varotra hafa amin'ny fe-potoana voafantina izay hivoaka amin'ny fotoana manaraka hisian'ny fametrahana anao.
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fampiasana Trigger Trader dia ny fampiasana ny fahafaha-manefatra maro an'ny Standard Trader hahitana ireo fironana lehibe, nefa tsy manokatra varotra. Avy eo ampiasao Trigger Trader hanokatra ny varotra amin'ny fe-potoana maro arakaraka ny fironana lehibe amin'ny alàlan'ny fanamboaranao manokana. Io dia ahafahanao miditra amin'ny fironana lehibe miverimberina, mijinja azy ireo isaky ny azo atao pip.
MA Pullback Trigger mpivarotra
Super Arrow Trigger mpivarotra
Mpivarotra Trigger Super Signals
Heikin-Ashi Trigger mpivarotra